Iza i Barabbas - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-02 > Iza moa i Barabbas?
Resahin’ny Filazantsara efatra ireo olona niova fo tamin’ny fihaonany fohy tamin’i Jesosy. Ireo fihaonana ireo dia voarakitra ao anatin’ny andininy vitsivitsy ihany, saingy mampiseho lafiny iray amin’ny fahasoavana. “Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa Kristy maty hamonjy antsika fony mbola mpanota isika.” (Romana 5,8). Barabasy dia olona iray izay navela hiaina izany fahasoavana izany tamin’ny fomba miavaka.
Fotoan’ny Paska jiosy tamin’izay. Efa nogadraina i Barabasy miandry ny famonoana azy. Nosamborina i Jesosy ary notsaraina teo anatrehan’i Pontio Pilato. Fantatr’i Pilato fa tsy nanan-tsiny i Jesosy tamin’ny fiampangana azy, ka nanao tetika mba hanafahana azy. “Tamin’ny fety anefa, dia fanaon’ny governora ny namoaka izay voafonja tiany ho an’ny vahoaka. Fa tamin'izany andro izany dia nisy mpifatotra malaza atao hoe Jesosy Barabasy. Ary rehefa tafangona ny olona, ​​dia hoy Pilato taminy: Iza moa no tadiavinareo? Iza no halefako ho anareo, Jesosy Barabasy sa Jesosy, Izay atao hoe Kristy? » (Matio 2.7,15- iray).
Nanapa-kevitra ny hanao ny fangatahan'izy ireo i Pilato. Nafahany ilay lehilahy nigadra noho ny fikomiana sy ny vonoan'olona ary natolony an'i Jesosy ho sitrapon'ny vahoaka. Noho izany dia voavonjy tamin'ny fahafatesana i Barabasy ary Jesosy dia nohomboana teo amin'ny toerany teo anelanelan'ny mpangalatra roa. Iza io Jesosy Barabasy io? Ny anarana hoe "Bar abba [s]" dia midika hoe "zanaky ny ray". I Johannes dia miresaka tsotra fotsiny hoe "Barabbas" i Barabbas, tsy olona maniditra trano toy ny mpangalatra, fa iray amin'ireo karazan'entana mitahiry olona, ​​tsy miankina ary mpandroba, izay manimba sy manimba ary manararaotra ny fahantoman'ny hafa. Ka i Barabbas dia olona tao anaty.
Nifarana tamin'ny famoahana an'i Barabbas ity fihaonana fohy ity, fa mametraka fanontaniana mahaliana sy tsy voavaly. Ahoana no fomba niainany taorian'ny androm-piainany? Nieritreritra momba ny zava-nitranga tamin'ny Paska ve izy? Nanova ny fomba fiainany ve izany? Ny valin'ireo fanontaniana ireo dia mijanona ho mistery.
Tsy niaina ny fanomboana sy ny fitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty i Paoly. Izao no nosoratany: “Voalohany indrindra, dia izao no noraisiko taminareo, dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny Soratra Masina, dia nalevina, ary natsangana tamin’ny andro fahatelo araka ny Soratra Masina.” (1. Korintiana 15,3-4). Mieritreritra ireo fisehoan-javatra ivon’ny finoana kristiana ireo isika indrindra amin’ny vanim-potoan’ny Paska. Iza anefa io gadra navoaka io?
Ianao io voafonja navoaka ho faty io. Ilay voan’ny faharatsiana ihany, ilay voan’ny fankahalana ary ilay voan’ny fikomiana izay nipoitra teo amin’ny fiainan’i Jesosy Barabasy dia matory any amin’ny toerana iray ao am-ponao. Tsy mitondra voka-dratsy hita miharihary eo amin’ny fiainanao izany, fa hitan’Andriamanitra mazava tsara izany: “Fa fahafatesana no tambin’ny ota, ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin’Andriamanitra ao amin’i Kristy Jesosy Tompontsika.” (Romana 6,23).
Amin’ny fahazavan’ny fahasoavana nambara tamin’ireo fisehoan-javatra ireo, dia ahoana no hiainanao mandritra ny androm-piainanao? Tsy sahala amin’i Barabasy, fa tsy zava-miafina ny valin’io fanontaniana io. Andinin-teny maro ao amin’ny Testamenta Vaovao no manome fitsipika azo ampiharina ho an’ny fiainana kristiana, fa ny valiny dia azo inoana fa nofintinin’i Paoly tao amin’ny taratasiny ho an’i Titosy: “Fa efa niseho tamin’ny olona rehetra ny fahasoavan’Andriamanitra ka mampianatra antsika hiala amin’ny ratsy fanahy. ny olombelona sy ny filan’izao tontolo izao ary ny miaina amim-pahendrena, amim-pahamarinana sy amim-panajana eo amin’izao tontolo izao ary amin’ny fiandrasana ny fanantenana sy ny fisehoan’ny voninahitr’Andriamanitra lehibe sady Mpamonjy antsika, dia Jesosy Kristy, Izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotra antsika amin’ny tsi-fahamarinana rehetra. ary nanadio ny tenany ho fananan’ny olona mazoto amin’ny asa tsara” (Titosy 2,11- iray).